Dr Gaboose Muxuu Doonaayay In uu Innoo Sheego? Qalinka: M. Haaruun – WARSOOR
Haye, dhakhtarro badan baa dhintay, kuwo kale na xoog ayay sakaraad u yihiin, aniguna kolkii aan dhawaan bukooday ee xoog isula shawray, shaqadii waa ka fadHiistay! Kolkaas ma xiliga ay ugu sarayso baahida dhakhtar loo qabo, ee awalba aadka u saraysay, ayaa idinla sugaayay baa na leedahay Digtoor? Taas maxaa uga jeeddaa? Dhakhtarada dhintay iyo kuwa qiriric leh maxaa u soo qaadatay? Dhab ahaan maxaa rabtay in aad noo sheegto?
Haye, dhakhtarnimadii iyo siyaasaddii ba waa ka tegay, dib na iigu maqli maysaan, samafal baanan u wareegayaa. Dhakhtarnimada samafal weyn baa ku jira haddii laga dhigo, siyaasadda na sida oo kale. Hadiiba aad na leedahay haatan hawlgab baan gelayaa oo shaqadii badnayd waa yaraynayaa, miyaanay samafalka u weyn ahayn in ardayda caafimaadka aad train garaysid, oo masaakiintii aad mudada dheer gacanta kulul ku qaban jirtay, ee weliba xoogga u tuujin jirtay, aad haatan bilaash ku dawayso, u gu yayraan usbuucii maalin ama laba? Ma samafal taas ka weyn baa jiraba? Dictoorka sidee ka noqotay? Taloow muxuu doonayaa in uu innoo sheego?